Inkqubo yokuCocwa kweMagnetic abavelisi kunye nabanikezeli - China Inkqubo yokuCocwa kweMagnetic
Plate Magnetic yokuhambisa Belt Ukwahlula
Iplate yeMagnetic isetyenziselwa ukususa i-tramp iron kwizinto ezihambayo ezenziwa ngee-chutes ducts, spouts okanye kwiibhanti zokuhambisa, izikrini kunye neetreyi zokutya. Nokuba loo nto yiplastiki okanye yiphepha lempompo, ukutya okanye isichumisi, iimbewu zeoyile okanye inzuzo, isiphumo siqinisekile kukhuseleko lokuqhubekeka koomatshini.
Isahluli seMagnetic Magnetic esinee-Multi-Rods
Izahluli zeMagnetic esahlukileyo ezineentonga ezininzi zisebenza ngokukuko ekususeni ukungcoliseka okuyimveliso kwiimveliso ezihamba simahla ezinje ngomgubo, igranu, ulwelo kunye neemulsions. Zibekwa ngokulula kwii-hoppers, kwiindawo zokungenisa iimveliso, kwii-chutes nakwiindawo ezigqityiweyo zokuphuma kwempahla.
Idrowa yeMagnetic yakhiwe neqela lamagreyithi kazibuthe kunye nendlu engenazintsimbi okanye ipeyinti ibhokisi yesinyithi. Kukulungele ukususa okungcolileyo okuphakathi kunye nokuhle okuvela kuluhlu lweemveliso ezihamba simahla ezomileyo. Zisetyenziswa ngokubanzi kushishino lokutya nakwimichiza.
Imigibe yeLiquid Magnetic yenzelwe ukususa nokucoca iintlobo zezinto ezivela kwimigca engamanzi kunye nezixhobo zokulungisa. Isinyithi esineentsimbi sikhutshelwa ngemagnethi ekuhambeni kwakho kolwelo kwaye uqokelelwe kwiityhubhu zemagnethi okanye isitayile sesahluli semagnethi.
I-Magnetic Tube isetyenziselwa ukususa ukungcola okuvela kwizinto ezisimahla ezihamba ngokukhululekileyo. Onke amasuntswana ayoni afana neebholithi, amandongomane, iitshiphusi, intsimbi yentsimbi eyonakalisayo inokubanjwa kwaye ibanjwe ngokufanelekileyo.